ပင်မစာမျက်နှာ » အက်ပ်များ » ကိရိယာများ » File Manager - Droid Files
ကိရိယာများ | 3.1MB
File Manager - Droid ဖိုင်များသည် Android Market တွင်ပေါ့ပါးသော file manager (3MB ထက်မနည်း) ဖြစ်နိုင်သည်။ အရင်းအမြစ်များစားသုံးမှုအနိမ့်စားသုံးမှုကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ဖိုင်မန်နေဂျာ - Droid ဖိုင်များသည်၎င်း၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်စွမ်းရည်များကိုအလျှော့မပေးချေ။ သင်၏ local သိုလှောင်မှုနှင့် SD Card တွင်သိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်များ / ဖိုင်တွဲများကိုရှာဖွေရန်, ရှာဖွေခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ကူးယူခြင်း, ဖိုင်များ / ဖိုင်တွဲကိုအမည်ပြောင်းပါ, ကူးယူပါ။
sd သိုလှောင်မှုနှင့် SD Card ၏လူကြိုက်များသောဖိုင်တွဲများသို့အမြန်ဝင်ရောက်ခြင်း။
◆ file histrel ား folder ကို bookmark အဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။
ဖိုင်များကိုကူးယူခြင်း / နောက်ခံသို့ကူးယူခြင်း။
◆ file filter ကိုရှာဖွေခြင်း br> ဖိုင်များကိုမျှဝေပါ။
သင်ဤ file manager tool ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါက Developer ၏ Social Media အကောင့်ကိုလိုက်နာလိုပါက ကျေးဇူးပြု. developer ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်ကိုလိုက်နာလိုပါက ကျေးဇူးပြု. developer ၏ Social Media အကောင့်ကိုလိုက်နာလိုပါက ကျေးဇူးပြု. တည်ဆောက်ရန်
♥ Google : https://plps.google.com/100162374001113331316169687
စင်ကြယ်သောမာစတာအကြောင်းအကြံဥာဏ်များ, ကျေးဇူးပြု. Google Play တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ Saquer0716@gmail.com မှတဆင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ တုံ့ပြန်ချက်တိုင်းကိုပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံနိုင်သည်။
ဘာထူးသလဲ File Manager - Droid Files
Android လိုအပ်သည်: Android 6.0 or later
(1328) Rate it